Bangladesh: Taorian’ny tondradrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2018 19:14 GMT
(Ny halehiben'ny tondra-drano tany Bangladesh: Sarin'ny Zanabolana nalaina tamin'ny 3 Aogositra 2007, natolotr'i Cegisbd)
Ahoana no ahafahanao maneho ny tena endriky ny tondradrano? Ny fahitana trano tondraky ny rano ve sa ny sambo eny an-dàlambe sa ny olona mirobo-drano? Mampiseho ny sariny ny fiantraikan'izany tamin'ny fiainan'ny Bangladeshis maro ilay mpanao gazety mpaka sary malaza sady bilaogera Shahidul Alam. Hoy izy:
… Miaraka amintsika indray ny tondra-drano. Ao anatin'ny tsingeringerina voajanaharin'ny ‘fotoanam-pambolena izy ireo. Manondraka ny tany izy ireo, mamelona indray ny tany fambolena, manaisotra ny poizina. Saingy ny fandripahana ala any an-tendrombohitra, ny fanorenana tsy ara-dalàna, ny lalana ratsy paika sy ny tsy fahaizan'ny mpitondra mikarakara no mahatonga ny tondradrano haka endrika herisetra. Lasa tezitra ny rano.
Nisy ny ezaka fanangonana fanampiana tamin'ny tondradrano avy amin'ny sarangam-piarahamonina tsirairay. Maro ny olona nikarama no nanolotra ny karamany iray andro ary nametraka izany tany amin'ny Lehiben'ny Governemanta (mpisolo toerana) misahana ny Fanangonam-bola. Navitrika tamin'izany ihany koa ireo bilaogera Bangladeshi . Nisy ny hetsika fanangonam-bola nataon'ireo bilaogera toa an'i:
Ilay bilaogera Kanadiana mpila ravinahitra Mikey Leung
Nanome ny lisitry ny ezaka fanangonam-bola maro kokoa ny bilaogy Bangladesh Real Estates Updates. Na izany aza, nitsikera ny fampiasana ny hetsika fanangonam-bola ho dokambarotry ny orinasa sasany ny bilaogy Bangladesh Corporate Blogs. Ohatra iray, manana tanjona hafa ny teny filamatra tahaka ny hoe “Taka iray no omena ny tahiry fanampiana amin'ny tondra-drano isaky ny kitapo simenitra iray lafo”. Nampahatsiahy ilay bilaogy fa tsara kokoa ny misoroka noho ny mitsabo ary nilaza hoe:
Azoko antoka fa ato anatin'ny andro vitsivitsy dia mety hahita ireo orinasa mikarakara ny hetsika ao Bangladesh hanararaotra ity ‘fanentanana’ (tondra-drano) ity ianareo ary hikarakara fampisehoana hanaovana asasoa, fampisehoana lamaody, sakafo hariva sns…… mba hanampiana fotsiny ireo mahantra sy ireo tratran'ny tondradrano ao Bangladesh. Manontany tena aho hoe nahoana ireo orinasa mpikarakara hetsika miroborobo ireo no tsy mikarakara fanentanana, na hetsika fiarovana ara-pahasalamana eny amin'ny tanànakely, sy ny foiben'ny tanàndehibe hafa rehefa tsy misy ny tondradrano. Hatraiza ny fanaovan'izy ireo asa soa rehefa amin'ny fotoana maha-maina ny tany?
Nahatonga ireo olona ho tsy manan-kialofana ny andiana tondradrano voalohany. Maro ny loza rehefa nisintaka ny tondradrano. Niresaka momba ny loza mitatao amin'ny aretim-pivalanana ary nitady fomba hisorohana izany ny bilaogy An ordinary citizen .
Nitanisa ny dingana tokony hataon'ny Governemanta ihany koa ilay bilaogera mba hiatrehana ny fanamby hanampiana ireo olona nafindra toerana.
Nandefa sary mampiseho ny fisintahan'ny tondradrano tao an-tanàndehiben'i Dhaka ny bilaogin-tsary Ershad Ahmed avy ao Dhaka.